Ibhafu eqhelekileyo-ephindwe kabini - I-Airbnb
Ibhafu eqhelekileyo-ephindwe kabini
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguMel
Okwethu sisakhiwo esidweliswe kwibanga lesi-2 esaqala ngo-1670s. Imiqadi eveziweyo kunye nezinto ezininzi zantlandlolo zongeza kwi-ambiance yemveli kwaye sinikezela ngenkonzo efudumeleyo nenobubele. Amagumbi aliqela phezu jonga umlambo kunye iimbono emangalisayo emazantsi phezu reserve RSPB.
Eli gumbi litofotofo loSapho linegumbi lokuhlambela elahlukileyo elinebhafu; amaziko okwenza iti nekofu kunye nomabonakude
Bonisa zonke 17 izinto onokuzisebenzisa
IBurnham-on-Crouch liziko leyachting elidumileyo, elingene kwimbali yaselwandle njengoko libonwa kwimyuziyam yasekhaya kunye neeklabhu zeyacht. Ezinye iimyuziyam ziquka iMangapps Railway museum kunye neMyuziyam yaMandla (iMaldon 10 miles).
Idume ngokutshona kwelanga okumangalisayo, ecaleni komlambo kunye nokuhamba ilizwe kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile.
Ngokuchasene nehotele kukho indawo yokugcina i-RSPB. Uhambo ngephenyane ukuya kubona amatywina angabhukishwa.
Kukho ibala yegalufa kunye nokukhwela ihashe ukonwabela nalapha ekhaya.
I-cinema ye-1930 ekhethekileyo ibonisa iifilimu zamva nje.
Umbuki zindwendwe ngu- Mel
Ujoyine nge- 2020 Matshi
Ihotele ibikusapho olunye iminyaka engama-60 kwaye izamile ukunikezela ngenkonzo efikelelekayo enobubele kumthengi ngamnye. Abathengi ababuyayo bakhumbula i-wit eyomileyo kodwa enenkathalo katatomkhulu womphathi wangoku kwaye babone ukufana nosapho. Abasebenzi abanobubele bamkela ngokufudumeleyo kwaye bayakuvuyela ukunceda ukwenza ukuhlala komntu wonke kukhululeke kangangoko.
Ihotele ibikusapho olunye iminyaka engama-60 kwaye izamile ukunikezela ngenkonzo efikelelekayo enobubele kumthengi ngamnye. Abathengi ababuyayo bakhumbula i-wit eyomileyo kodwa ene…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 23:00